ओली–प्रचण्ड ‘वान टु वान’ भेटवार्ता, सरकार छोड्ने र सरकार बनाउने काम तिब्र - ओली–प्रचण्ड ‘वान टु वान’ भेटवार्ता, सरकार छोड्ने र सरकार बनाउने काम तिब्र
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २९ माघ 56 Views
२९ माघ, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रियालगायतका विषयमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ ।
ललितपुरस्थित एक निजी निवासमा भएको भेटवार्ताबारे विस्तृत जानकारी भने आइसकेको छैन । पार्टी एकता र सरकार गठनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सहमत दुई दलबीच एकतामा नीति र नेतृत्वमा सहमति जुटाउन उनीहरु वार्तामा जुटेको अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जनकारी दिए ।
उनीहरुको भेटवार्तापछि चाँडै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकको तयारी भएको छ ।
सत्ता हस्तान्तरण गर्न राप्रपा अध्यक्ष थापालाई हतार
उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले जनताको पछिल्लो जनादेशअनुसार वर्तमान सरकारले चाँडै सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेको बताएका छन् ।
उनले संघीय संसद् गठनको पूर्णतामा समय लागेकाले सत्ता हस्तान्तरणमा पनि समय लागेको स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका थापाले भने, “ऊर्जाको विकासबाट मात्र देशमा समृद्धि र विकास हुन्छ ।”
अब बन्ने नयाँ सरकारलाई आफूहरुको रचनात्मक सहयोग रहने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले गरे पदबहाली
प्रदेश नं ३ नं प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आज अपराह्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्।
पदबहालीपछि आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश नं ३ को सन्तुलित विकासका लागि सीमित स्रोत साधन परिचालन गरी १३ वटा जिल्लामा नमूना शहर बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको काम अगाडि बढाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रसेवकले ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आग्रह गरे ।
उनले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित शहीद स्मारकमा गई आजै शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङले पनि शहीद स्मारकमा पुष्पगुच्छा चढाएका थिए ।
आजै उनले माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्मरकट्टेल र एमालेबाट केशव स्थापित मन्त्री बनेका छन् । जम्मरकट्टेलले प्रदेशको गृह मन्त्रालय मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् भने स्थापित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई सोमबार प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सपथ ग्रहण गराएकी हुन्।
आन्तरिम मामिला मन्त्रालय नपाएपछि जम्मरकट्टेलले सरकारमा जान आनाकानी गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएपछि सहमति जुटेको थियो ।
२०७४, २९ माघ
भारतका प्रधानमन्त्रीको आज नेपाल भ्रमण, के छन् त मुख्य एजेन्डा ?
एमालेले भनेजस्तो देशको ढुकुटी रित्तो छैन : काँग्रेस
कारागारमा क्षमता नभएपछि गोरे र २८ बन्दी जिप्रका मोरङकै हिरासतमा
गोरेको बयान : एसएसपी खत्रीलाई पक्रिए सबै रहस्य खुल्छ !
आगलागी : औषधि पसलसहित चारवटा घर जलेर नष्ट
जनसंख्याको आधारमा प्रदेशमा बजेट दिन राजपाको माग
साढे ३३ किलो सुन प्रकरण : एसएसपी लोहनीसहित २८ जना जेल चलान
पक्राउ पर्नुअघि गोरेले खुलासा गरेको भिडियो टेप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
यो पत्र हेर्नुहोस्, गोरे पक्राउ कि ?आत्मसमर्पण !